Wararka - 2020, waxaa laga yaabaa inuu yahay sanadkii ka soo horjeedka Seeraar
Dhawaan, Bitcoin waxay umuuqataa inay kujirto xaalad cakiran. In kasta oo qiimaha Bitcoin u muuqdo mid aad u kacsan, cryptocurrency ayaa ku jirtay muddo xoojin labadii toddobaad ee la soo dhaafay, ka dib markii ay si kooban u garaacday sare $ 7,470. Iskuduwaya inta udhaxeysa aagga sare ee $ 6,000 iyo aagga hoose ee $ 7,000. Marka xigta, xagee Bitcoin aadi doontaa?
Muddo dheer, dadku way ka shaki qabeen qiimaha aasaasiga ah ee cryptocurrencies. Waxay liis garayn xawaaraha macaashka “gaabis” ee Bitcoin, jabsiga Ethereum, iyo “cilladaha kale” ee ka jira warshadaha, iyagoo ku andacoonaya in fasalka hantidan uusan mustaqbal lahayn. Si kastaba ha noqotee, adduunyada qasan ee maanta, muuqaalka dhaqaala-dhaqaaleedka ayaa soo koraya, gaar ahaan kripto, gaar ahaan Bitcoin.
Sida laga soo xigtay warbixin ay daabacday Bloomberg, Bitcoin waxay u dhiseysaa awood suuq ballaaran oo dibi ah. Warbixinta ayaa ku nuuxnuuxsatay in sanadka 2020 uu noqon doono sanadka ay Bitcoin noqoto dahab dijitaal ah. “Sannadkani waa tijaabada muhiimka ah ee u-gudubka Bitcoin ee u beddelaya lacag-u-ekaanta sida dahabka, waxaanan rajaynaynaa inay ka gudubto imtixaankan.”
Tirada dadka xiiseynaya xannibaadda iyo cryptocurrency ayaa sii kordheysa
Sida laga soo xigtay sahan ay sameysay Paxful, oo ah suuq ganacsi caalami ah P2P Seeraar, dadka Mareykanka ah ee aqoonta u leh waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' waxay muujiyeen xiisaha sii kordhaya ee tikniyoolajiyadda xannibaadda iyo cryptocurrencies. Kooxdan dadka ahi waxay si sii kordheysa u daawanayaan hantida dijitaalka ah si loogu beddelo nidaamka dhaqameed ee "cilladaysan".
Sida laga soo xigtay warbixin cilmi baaris ah oo la sii daayay Abriil 23, cryptocurrency ayaa u bislaanaya sidii hanti ahaan. Ku dhowaad 50% jawaabeyaasha ayaa rumeysan in xaaladaha degdegga ah ee ka jira nidaamka maaliyadeed ee soo jireenka ahi ay u adeegi doonaan fursad lagu caawinayo dadka inay dareenkooda u weeciyaan Bitcoin beddel ahaan.
Sida laga soo xigtay sahanka, isticmaalka ugu badan ee Bitcoin waxaa ka mid ah bixinta nolosha dhabta ah (69.2%) iyo la dagaallanka sicir bararka iyo musuqmaasuqa (50.4%).
Artur Schaback, oo ah madaxa hawlgallada iyo aasaasaha shirkadda Paxful, ayaa wareysiga ku yiri: “Waxaa xusid mudan in dad badani aaminsan yihiin in korsiga guud la gaari doono 6 ilaa 10 sano ee soo socota. Taas bedelkeeda, jawaabeyaasha qaar waxay aamminsan yihiin inay isku mid yihiin Xumbada 'cryptocurrency' ayaa ku burburi doonta muddo gaaban gudahood. Waxaan rajo ka qabaa xaalada ugu horeysa, marka waxaan u maleynayaa in ka warshadeyn ahaan, waa inaan ku dadaalno inaan abuurno badeecooyin badan oo aan ku dabaqno alaabooyin badan kiisaska isticmaalka nolosha dhabta ah. Ka caawi sidii loo dardar gelin lahaa korsashada caadiga ah. ”
Marka la eego aafada cusub ee caalamiga ah ee faafa, Paxful wuxuu aaminsan yahay in labadaba cryptocurrency iyo nidaamyada dhaqameed dhaqameed la tijaabinayo, taas oo sharraxaysa ilaa xad sababta qiimaha BTC uu kor ugu kacayo maaddaama BTC uu noqonayo hanti badbaado leh.
Schaback wuxuu ku nuuxnuuxsaday in marka la barbardhigo kahor, wacyiga dadku ee Bitcoin shaki la’aan uu hadda ka sarreeyo. “Waxaan xusuustaa markii aan bilownay, cidna kama ogaanayn Bitcoin oo xitaa kama fikirin erayga'Bitcoin '. Si kastaba ha noqotee, natiijooyinka sahanka sanadkan iyo sanadkii hore, dad badan ayaa maqlay Bitcoin. Dad badan ayaa ku xira fikradaha kala duwan sida lacagta iyo tikniyoolajiyadda. Weli waddo dheer ayaa inoo dhiman, laakiin waxaan aad u xiiseynayaa inaan arko badeecooyin badan oo gacan ka geysan doona sidii caadiga loo ahaan lahaa.
Marka laga hadlayo caqabadaha hortaagan in la korsado, sahanku wuxuu kaloo carrabka ku adkeeyay in 53.8% jawaab bixiyaasha ay rumeysan yihiin in la'aanta aqoonta la xiriirta ay caqabad ku tahay baahinta lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'.
Sida lagu sheegay warbixinta, jawaab bixiyaasha ayaa aaminsan in waxyaabaha ugu muhiimsan ee gacan ka geysta kordhinta heerka korsashada ay yihiin macdanta moobiilka, soo kabashada altcoyin, maalgashiga hay'adaha iyo adeegsiga shirkadaha ee teknolojiyadda xannibaadda.
Paxful's COO wuxuu faallo ka bixiyay caqabadaha mustaqbalka: “Caqabada ugu weyn waa weli aqoonta ku saabsan cryptocurrency lafteeda. Waan ognahay in dad badani maqleen, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay sabab qaldan, sida khamaarka iyo khiyaanada Heerka. Sababtaas awgeed, dhagaystayaasha guud waxay wali leeyihiin dareen cabsi ah. Ka warshadeyn ahaan, tani waa caqabaddayada ugu weyn.
Mustaqbalka Bitcoin ayaa sii wadaya inuu soo kabsado
Kadib markay la kulantay hoos udhaca mugga ganacsiga usbuucyadii lasoo dhaafay, Bitcoin mustaqbalka mustaqbalkiisa ganacsi wuxuu bilaabay inuu dib u soo laabto. Marka loo eego xogta ugu dambeysa ee CME, badeecooyinkeedu waxay ku dhufteen meel sare bishii hore marka loo eego xisaabaadka firfircoon, oo leh isugeyn kobaca sanadlaha ah ee 161%
Sida laga soo xigtay warbixinnada, jaangooyaha Mareykanka, Guddiga Amniga iyo Is-dhaafsiga (SEC) wuxuu xaqiijiyay in Sanduuqa Bilada (Sanduuqa Bilada) ee hoos imanaya Teknolojiyada Renaissance ay hadda gali karaan suuqyada mustaqbalka ee mustaqbalka ee Bitcoin. Sanduuqan waxaa loo yaqaan waxqabadka soo celinta maalgashiga ee muuqda illaa iyo sanadkaan.
Sida laga soo xigtay macluumaadka, Renaissance Technology waxay siin doontaa CME Group qandaraaska mustaqbalka qandaraaska lacagta bitcoin, CME waa mid ka mid ah labada bixiyeyaasha mustaqbalka bitcoin mustaqbalka.
$ 10 bilyan oo ah sanduuqa xayndaabka ee hoos yimaada Renaissance ayaa dhawaanahan magac ku yeeshay warbaahinta. In kasta oo fayraska cusub ee taajku uu suuqyada adduunka galiyay jahawareer isdaba joog ah, sanduuqa ayaa gaadhay 24% kobaca illaa iyo sannadkan. Sida laga soo xigtay CNBC, qiyaasta maaraynta ee Sanduuqa Biladdu waa qiyaastii US $ 10 bilyan, oo u dhiganta qiyaastii RMB 70 bilyan. Waxaa lagu qiyaasey miisaanka maareynta oo ah tobanaan bilyan oo doolar, dakhliga sannadkan wuxuu ku dhow yahay 3.9 bilyan oo doollarka Mareykanka ah, oo u dhiganta ku dhowaad 30 bilyan yuan; ka dib marka laga jaro khidmadaha maamulka iyo wadaagga waxqabadka, sanduuqa wuxuu leeyahay faa iiddo saafiya oo qiyaastii ah 2.4 bilyan oo doollarka Mareykanka ah, oo u dhiganta ku dhowaad 17 bilyan yuan.
Sida laga soo xigtay Wall Street Journal, laga bilaabo Abriil 14, sanduuqa maaliyadu wuxuu leeyahay wax soo saar isugeyn ah 39% sanadkan. Xitaa suuqa Maarso ee "Falls Great" oo Buffett uusan arkin intuu noolaa, Sanduuqa Biladaha wuxuu wali kasbaday 9.9%. Isla bishaas, S & P 500 ayaa hoos udhacay 12.51%, Dow-na hoos ayuu udhacay 13.74%, labaduba waxay garaaceen hoos udhacii ugu weynaa ee bil kasta tan iyo bishii Oktoobar 2008.
Shaki kuma jiro in sanduuqan medallion-ka ah, oo aan waligiis lacag lumin tan iyo markii la aasaasay isla markaana sidoo kale heli kara dib-u-soo-celin maalinle ah inta lagu jiro xiisadda dhaqaale, wuxuu u taagan yahay aqoonsiga raasumaalka dhaqameed ee suuqa loo yaqaan 'cryptocurrency', waana ku qasban tahay inuu keeno weyn Faa'iidooyinka u leh suuqa mustaqbalka CME Seeraar. dareeraha.
Siyaasadda fudfududda aan xadidnayn ayaa kicin karta weerar celiska Seeraar
In kasta oo dib u soo kabashada xoogan ee qiimaha hantida, oo ay ku jiraan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies', aragtida dhaqaalaha adduunka ayaa walwal laga qabaa. Shantii toddobaad ee la soo dhaafay, 26 milyan oo shaqaale ah ayaa shaqo la'aan ka codsaday Mareykanka oo keliya. Heerka shirkadda, shirkadaha cilmi baaristu waxay filayaan in shirkaddu lumiso trillions of dollars oo dakhli ah.
Sidaa darteed, layaab malahan in bangiyada dhexe iyo dowladaha adduunka ay dadaal u galeen badbaadinta dadka, shirkadaha, iyo shirkadaha oo dhan.
Si loo yareeyo khatarta dhaqaale xumo ee soo food saartay Mareykanka saamaynta cudurka faafa awgeed, Fed ayaa horay u arag “tallaabo weyn”. Fiidnimadii 15-kii Maarso, Fed wuxuu hoos u dhigay dulsaarka dulsaarka eber wuxuuna bilaabay barnaamij fududeyn baaxad weyn leh oo gaaraya US $ 700 bilyan. Bishii Maarso 17, Kaydka Federaalku wuxuu bilaabay Xarunta Maalgelinta Waraaqaha Ganacsiga (CPFF) iyo Nidaamka Abaalmarinta Aasaasiga ah ee Ganacsi (PDCF) si loo siiyo dammaanad-bixiyeyaasha waraaqaha ganacsiga. Bishii Maarso 23, Kaydka Federaalku wuxuu soo saaray siyaasad fududeyn aan xadidneyn (QE) waxayna bilaabeen inay "iibsadaan" ku dhowaad dhammaan alaabada amaahda ee suuqa marka laga reebo keydadka si ay u bixiyaan taageero xisaabeed ku filan suuqa.
Dad badan ayaa aaminsan in ficilada isdaba jooga ah ee Fed ay kaliya muujinayaan halista xaaladda Mareykanka.
Bangiga Japan (BOJ) ayaa sidoo kale xaqiijiyay isbeddelladan. Sida laga soo xigtay Nikkei Asian Review, iyada oo soo xiganaysa dad arrinta yaqaana, Bangiga Japan wuxuu raadinayaa iibsasho aan xadidnayn oo ah bonds-ka dawladda Japan isagoo isku dayaya inuu kiciyo dhaqaalaha. Waxa kale oo ay rajeyneysaa in ay ballaariso barnaamijkeeda fududeynta tirada si loo laba jibaaro iibsashada curaarta shirkadaha iyo warqadda ganacsiga.
In kasta oo Mareykanku bilaabay barnaamij iibsi deyn xaddidan, Max Bronstein, oo xubin ka ah kooxda maal-gashiga hay'adda ee is-weydaarsiga loo yaqaan 'Coinbase', ayaa caddeeyay in "nidaamka hadda jira uu gebi ahaanba burburay."
Dad aad u tiro badan ayaa rumeysan in hantida baahinta iyo yaraanta hantida 'crypto' ay ka faa'iideysan doonaan isbeddelkan ku wajahan lacagta aan la aqoon iyo meelaha maaliyadeed marka la barbar dhigo lacagaha fiat ee bangiyada dhexe.
Agaasimihii hore ee Goldman Sachs iyo maareeyaha sanduuqa dayrka Raoul Pal ayaa ku sharraxay daabacaadda Abriil ee "Global Macro Investors" warsidaha in uu u maleynayo in ay u badan tahay inaan aragno "nidaamkeenna lacageed ee fashilmay" ama "qaab dhismeedka maaliyadeed ee hadda jira ayaa burburay." “.
Bitcoin waxay si weyn uga faa'iideysan doontaa ka-guurista nidaamka sharciga ee nidaamka deegaanka dhijitaalka ah. Isaga oo ka hadlaya Seeraar, Pal wuxuu qoray: “Tani waa nidaam dhammaystiran, la aaminay, la xaqiijiyey, ammaan ah, maaliyadeed iyo xisaab xisaabeed nidaam dijitaal ah. Mustaqbalka nidaamkeena ganacsiga oo dhan, lacagta lafteeda iyo barnaamijkeeda ay ku shaqeyneyso intaas kuma eka. “
Wuxuu intaas ku daray in Bitcoin ay u badan tahay inay gaarto $ 100,000 labada sano ee soo socota, xitaa waxay tuuri doontaa dabool dhan $ 1 milyan marka aragtida makro ay si weyn isu beddesho.
Kadib siyaasaddii “fudaydinta xaddidan ee aan xadidnayn”, Bitcoin weli ma waxay noqonaysaa “hanti badbaado-badbaado leh” dhibaatada dhaqaale? Marka la eego, Mike Novogratz, Agaasimaha Guud ee Galaxy Digital, ayaa sidoo kale saadaaliyay in Bitcoin laga yaabo inay raacdo dahab leh qiimo weyn oo qiimo leh, badanaa maxaa yeelay labadan hanti ayaa asal ahaan yar.
Xu Yingkai, oo ah lamaanaha aasaasay shirkadda 'BlockVC', ayaa Weibo ka sheegay in Seeraar ee 3,800 USD ay u badan tahay inay hoos u dhacdo hoos u dhaca suuqa. Kala badhkii Bitcoin ka dib (1-2 bilood ka dib), suuqa wuxuu bilaabay inuu si buuxda u soo kabto. Ka dib markii kala barka la dhammeeyay, cidhifka-geeska awgeed Hoos u dhaca dakhligu wuxuu ururin doonaa mawjado macdan qodayaal ah, laakiin maalin kasta cadaadiska iibka cusub ee suuqyadu sidoo kale wuu labanlaabmay sannad-ka-sannadka, waxaana loo malaynayaa in "dhimashadu ay sii kordhayso" .
Si kastaba ha noqotee, dadka qaar ka mid ah warshadaha ayaa tilmaamay in "hantida xasilloonida" ay tahay fikrad duug ah, laakiin iyada oo la tixgelinayo in Bitcoin ay leedahay suuq ballaaran oo xisaabiyaasheeda ay aad uga xoog badan tahay noocyada kale ee dhaqameed, baahida mustaqbalka ayaa si xaqiiqo ah u sii socon doonta. Sidaa darteed, shilka ka dib, Bitcoin ayaa hubaal ka soo kaban doonta dhaqso badan hantida Mareykanka ee soo jireenka ah. Marka laga eego aragtidan, Bitcoin weli waxay lahaan kartaa rajo wanaagsan, laakiin marka laga eego aragtida suuqa ee hadda jirta, ma jirto ka leexasho khatar ah.
Xaqiiqdii, ka dib muddo gaaban oo Bitcoin ah, sicirkani waa mid aad u soo jiidasho leh muddada dhexe iyo muddada dheer, waxaana laga yaabaa inuu yahay barta laga bilaabayo suuqa dibiga ee xiga.
Bitcoin waxay u uruurineysaa awoodda suuqa dibedda mustaqbalka
Warbixin ay daabacday Bloomberg ayaa lagu sheegay in Seeraar ay ku urursaneyso awood suuqa dibida. Xitaa cinwaanka warbixinta ayaa muujiyey aragti cad oo cagajugleyn - ”Bisayl Ballaadhan oo Seeraar Bitcoin Ah”. Bloomberg waxay rumeysan tahay in sanadkan Bitcoin ay dhameystiri doonto tijaabada muhiimka ah ee u gudubka sarifka lacagaha sida dahabka.
Warbixinta ayaa xustay sababo taxane ah oo suuqa Bitcoin u bislaanayo. Warbixinta ayaa sidoo kale xaqiijisay in "haddii taariikhda loo isticmaali karo hage, Bitcoin waxay helaysaa shidaal qaraabo ah maadaama suuqa saamiyadu dib u bilowdo."
Intaa waxaa dheer, Bloomberg wuxuu sheegay in Seeraar iyo dahab, oo ah laba hanti oo badbaado u ah indhaha dadka, la filayo inay ka faa'iideystaan ​​inta badan dhibaatadii suuqa ka dhacday ee ay sababtay caabuqa faafa ee cusub.
Laakiin sida laga soo xigtay falanqeeye caan ah oo caan ku ah cryptocurrency, haddii Bitcoin ay gaarto heer qiime gaar ah, waxay kicin kartaa suuq suuq ah, si kale haddii loo dhigo, qiimaha lacagta ayaa cirka isku shareeray.
Sabtidii la soo dhaafay, 200,000 taageerayaasha Twitter iyo ganacsade lagu magacaabo CryptoYoda ayaa sii daayay taxanahiisii ​​ugu dambeeyay ee farsamo, kaas oo uu ku sharaxay in qaab dhismeedka suuqa Bitcoin uu u janjeero inuu dhaco sababo la xiriira sameynta kor u kac qaabaysan iyo qaababka Garabka-laba calaamadood oo xamuul ah buugaagta - laakiin horumarka Bitcoin ee $ 7475 ayaa rogi doona xaaladdan, “kuna qasbaya gaagaaban in ay banneeyaan booskooda iyaga oo ku dhiirrigelinaya in ay iibsadaan boosaskan”:
“Guul-darrada heerka sare ah waxay horseedi doontaa dabool ballaaran oo baaxad leh, mugga amarada iibsaduna waxay horseedi doonaan dib-u-soo-celin xoog leh, gaar ahaan haddii iibsadayaashu ay horay u soo mareen heerkii hore ee iska caabinta hoose.”
Waxa uu doonayo inuu sharaxaad ka bixiyo ayaa ah in hadii Bitcoin ay si guul ah ku jabto, waxay cadeyn kartaa in ganacsiga hada dhinac ka socda uusan aheyn tilmaam dhanka sare ah, laakiin uu yahay geedi socod xoojinta iyo sii socoshada dhaqdhaqaaqa kore, kaasoo laga yaabo inuu gaaro $ 8,000 ama xitaa ka sareeya.
Avi Felman-ganacsade iyo falanqeeye ka socda hantida hantida ee loo yaqaan 'crypto asset fund' BlockTower-wuxuu arkay laba calaamadood oo farsamo Jimcihii la soo dhaafay oo si cad u muujiyay in qiimaha Bitcoin uu dhowaan mari doono sixitaan:
Isku xigxiga Demark (Tom Demark Sequential) waa tilmaame waqti ku saleysan, shaxda 3-maalin ee laambadda waxay u muuqataa isku xigxiga tirinta joogtada ah ee iibinta. Isla xaaladdu waxay dhacday labadii jeer ee hore markii qiimaha lacagta ay hoos u dhacday bartamihii Maarso iyo Diseembar 2019, laakiin waxay gaartay halka ugu sarreysa $ 10,500 horraantii sanadkan.
Ethereum hadda waxay umuuqataa mid aan awoodin inay jabiso 50-maalin iyo celceliska 200-maalin celceliska dhaqdhaqaaqa 3-maalin shaxda laambadda.
Intaa waxaa dheer, DonAlt wuxuu sheegay in inkasta oo safka maalinlaha ee dhowaa uusan muujin "isbeddel xoog leh oo hoos u dhacaya", ay "aad ugu dhowdahay furitaanka Bitcoin ee ugu sarreysa $ 10,000." Wuxuu tilmaamay in isbedelka qiimaha Bitcoin uu ka duwanaa kii bishii Febraayo Isku ekaanshaha qaab dhismeedka hadda jira.
Warbixinta Bloomberg “Seefta Bisaylka Bitcoin” ayaa lagu soo warramay in Bitcoin ay isu diyaarineyso suuq dibi ballaaran. Warbixinta, qoraaga wuxuu ku faahfaahiyay xiriirka ka dhexeeya Bitcoin iyo tusmada S & P 500, dahab, eber iyo dulsaarka xun. Sida laga soo xigtay warbixinta, jahwareerka suuqa saamiyada ayaa dardargeliyay u gudubka Bitcoin ee "dahab dijitaal ah".
Sanadka 2020, waa la xukumi doonaa in Bitcoin ay ka beddeli karto hanti mala-awaal khatar ah oo ay u beddeli karto "dahab dijitaal ah". Marka laga eego dhinaca isbeddelka, isbeddelka Bitcoin ayaa u muuqda inuu hoos u dhacay, halka isbedelka suuqa saamiyada uu bilaabay inuu kaco. Falcelinta noocan oo kale ah ee suuqa ayaa sidoo kale u oggolaan doonta dad badan inay lacagaha ku wareejiyaan hantida ku duugan.
weelka btc, weelka bitmain, crypto macdanta asic, weelka antbox, loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto", weelka antminer-ka,